Madaxweyne Ku-xigeenka Oo Daah-furay Shirkad Cusub Oo Gaadiidkeedu U Kala Gooshi Doonaan Gobollada - Somaliland Post
Home News Madaxweyne Ku-xigeenka Oo Daah-furay Shirkad Cusub Oo Gaadiidkeedu U Kala Gooshi Doonaan...
Madaxweyne Ku-xigeenka Oo Daah-furay Shirkad Cusub Oo Gaadiidkeedu U Kala Gooshi Doonaan Gobollada
Hargaysa (SLpost)- Madaxweyne ku xigeenka Somaliland C/raxmaan C/laahi Ismaaciil (sayalici), ayaa manta ka qayb galay xaflad lagu daah-furyay shirkad cusub oo gaadiid, taasi oo isaga kala gooshi doonta goboladda dalka.
Shirkadaasi cusub ee gaadiidka oo ay leeyihiin ganacsato reer Somaliland ah, oo magacaeeda la yidhaahdo SAHAL TRANSPORT, isla markaana ka shaqayn doonta qaadista dadka Rakaabka ah ee isaga kala gooshaya goboladda iyo degmooyinka dalka iyo sidoo kale alaabooyinka la dirayo.
Xafladda shaacinta shirkadani cusub oo lagu qabtay… waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Somaliland, wasiirka ganacsiga Dr. Muuse Qaasim, wasiirka Hawlaha guud C/rasaaq Khaliif Axmed, masuuliyiinta shirkadda SAHAL TRANSPORT, iyo marti sharaf kale.
Madaxweyne ku xigeenka oo munaasibadaasi hadal ka jeediyay ayaa ku amaanay masuuliyiinta shirkadaasi dedaalka wanaagsan ee ay muujiyeen, isagoo ku tilmaamay in shirkadani socdaalka gaadiidka ee ay soo kordhiyeen in ay ka mid tahay horumar dalka u soo kordhay.
“Shirkadani dalka waxay ku soo kordhisay horumar badan, waxaanay dadku ka maarmi doonaan gaadhi fuulkii iyo dadkii la kala jidanayay, saacada aad doonto ayaa u imanaysaa halkaad doontana way kuu gaynayaan alaabta. Markaa waa shirkad qaali ah, una baahan in dedaal la galiyo, waa in aad noqotaan shirkad dadka iyo dalkaba wax ku soo kordhisa, aad baanan idiin dhiirigelinaynaa”ayuu yidhi C/raxmaan ismaaciil Saylici.
C/raxmaan ismaaciil Saylici, waxa kale oo uu ka waramay faa’iidadda ay leedahay in wax la isku darsado, iyadoo haddii ay ganacsatadu sidan oo kale isugu geeyaan abuuritaanka shirkadaha in ay noqonayso mid wax weyn dalka iyo dadkaba u soo kordhinaysa.
Isagoo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “ Aduunku waxa ay ka faa’iidaystaan wixii ay isku darsadaan, oo ah hadba wixii dalku u baahan yahay, maantana wax wanaagsan ayaad soo kordhiseen, waxana wanaagsan in aad lahaatan shuruuco dadku raacan iyo sharci idiin yaala oo qeexaya sida loo kala sareeyo”.
Wasiirka Hawlaha Guud C/risaaq Khaliif Axmed, oo madashaasi hadal ka jeediyay ayaa ku amaanay ganacsatadda soo kordhiyay shirkadani cusub ee socdaalka, taasi oo ku tilmaamay mid dalka wax badan ka tari doonta, iyadoo kuwii hore u jiray kaga duwan in ay qaadayso dhamaanba wixii alaabooyin ah ee loo dhiibo.
Waxaanu yidhi “Haddii sida ay tahay loo fahmo way fiican tahay , wixii la wada leeyahay way ka fiican tahay, kuwa gaarka loo leeyahay marka sideedda loo ilaashado. Shirkadaha wadanka ka hana qaaday, waa inay dadkeenu ku dhiiradaan in alaabta ay meeshan ka dhiibaan saacad iyo badh ka dib ay helayaan.
Hawsha waa hawl loo baahnaa, waanu ku amaanayaa waxaanan idiin rejaynaynaa in aad dadka ugu horeysaan maada ay muruqoodi iyo maalkoodii isugu geeyeen dhallinyaradana aad ban u soo dhaweynayaa”.
Wasiirka ganacsiga Dr. Muuse Qaasin, oo isna halkaasi hadal ka jeediyay ayaa ka waramay ahmiyada ay shirkadani SAHAL TRANSPORT u leedahay dalka iyo dadkaba, iyo hawsha wanaagsan ee ay qabanayso bulsho waynta reer Somaliland.
Waxaanu yidhi “Waxaynu daahfuraynaa shirkad gaadiid oo ka shaqayn doonta isku xidhka socodka dalka. Markii hore waxaa gawaadhi dadka qaada laakiin imika nimankani dhallinyarada ahi waxay soo kordhiyeen in alaabta iyo dadkaba ay qaadan.
Wadankeenu waa wadan cusub oo maalinba wax ku soo biirayaan, waxaana loo baahan yahay inay ku soo biiraan dhallinyaradda gawaadhidan soo saaray, waxay mudan yihiin ku dayasho, hase ahaatee shirkadu waxay u socdaalayaa sida gawaadhida ku qoran galbeedka. Waxaananu rejanaynaa inay dhinac walba gaadhaan”.
Sidoo kale waxaa isna xafladaasi hadal ka jeediyay Mukhtaar Cali CIsmaan, oo ku hadlayay afka masuuliyiinta shirkadda SAHAL TRANSPORT, waxaanu fahfaahin ka bixiyay sida ay shrikadu u shaqayn doonto isagoo ku dheeraday muhiimada ay u leedahay shirkadani dhamaanba bulshadda reer Somaliland iyo waliba fursadaha shaqo abuurista ee ay u samaynayso dhalinyadda.
Waxa kale oo uu sheegay Mukhtaar Cali inay mudadda ugu horaysa ka shaqayn doonto magaalooyinka Hargaysa, Wajaale iyo Boorama, marka danbena ay bilaabi doonaan in ay ka shaqeeyaan goboladda kale. Waxaanu yidhi “Hawshani waxay socotay muddo badan waxaa maanta indhihiina ku arkaysaan shaqaalihii iyo gaadiidkii oo hortiina taagan taasina waxay ka turjumaysa in wadankeena ay yaalan fursado shaqo abuur lagaga faa’iidaysan karo shirkadan Sahal waxay shaqadeeda koobaad ka bilowday gobolada galbeedka waxaanu wadna tijaabo ee hadan mashruuca noo suurtogalo barigana waanu ku dari doona xukuumaduna way diin la shaqeyn doonta, shirkadana waa shirkad qayb muhiima ka qaadan doonta koboca dhaqaale”.